Apache® NetBeans ™ Inobudirira Yepamusoro-Chikamu Chikamu Chikamu | Linux Vakapindwa muropa
Apache® NetBeans ™ Inobudirira Pamusoro-Chikamu Purojekiti Mamiriro eApache Foundation
Iyo nyowani yepamusoro-chikamu chirongwa cheApache Foundation. Iyo yeNetbeans IDE.
Apache Foundation yazivisa nhasi kuti yakapa chinzvimbo chepamusoro cheApache® NetBeans ™. Zviri pamusoro pakon yakavhurwa sosi yekuvandudza nharaunda uye maturusi chikuva. Iyo inoshandawo se chimiro chekushandisa izvo zvinokutendera iwe kuti ugadzire desktop, nhare uye webhu kunyorera.
Iyo purojekiti yakazvarwa sechikamu chebasa revadzidzi muna 1996. Muna 2000 Sun akaitenga ndokuichinja kuita open source project. Pakatengeswa kambani, yakava chikamu cheOracle, iyo muna 2016 yakachinjisa kuApache Incubator.
Geertjan Wielenga, Mutevedzeri Wemutungamiri weApache NetBeans anotsanangura zvazvinoreva kuva chikamu chenheyo:
Kuve chikamu cheFA kunoreva kuti maNetBeans haasi chete iye zvino akasununguka uye akavhura sosi software: iri zvakare, nenzira yakasarudzika, uye kekutanga, phunyanzvi hwenheyo hwakanangidzirwa zvakanyanya mukugonesa hutongi hwakavhurika.
Mumwe nemumwe anoshanda weprojekti iye zvino ane izwi rakafanana sTsvaga iyo waybill nekero yeNetBeans. Iyi inhanho nyowani uye yakaitika uye nharaunda yakagadzirirwa iyo kwenguva yakareba. Kutenda kune manejimendi akasimba eNetBeans paSun Microsystems uye Oracle, Apache NetBeans ikozvino yakagadzirira chikamu chinotevera chekusimudzira kwayo uye tinogamuchira munhu wese kuti atore chikamu sevakaenzana sezvatinofambira mberi.
Shanduro nhatu dzeNetBeans dzakatoburitswa pasi peApache, yekupedzisira muna Kubvumbi gore rino. Iyo app yakakunda iyo 2018 Duke's Choice Award, yakasimbiswa mushe mubairo muJava ecosystem.
2 Zvinorevei iyo nyowani yepamusoro-chikamu chimiro chimiro chinorevei
El ad akagamuchira mvumo yenharaunda. Jaroslav Tulach iye, iye wekutanga musiki weprojekiti, akati:
Ndiri kufara kwazvo kuti shanduko yakafamba zvakanaka uye kuti "maNetBeans angu" rave chirongwa chakazara kuThe Apache Software Foundation
Ken Fogel, Mutungamiri weRuzivo Technology kuDawson College muMontreal, akati nezveNetbeans:
Kubva panguva yandakatanga kuongorora NetBeans kuti ishandiswe mumakosi angu kuDawson College neConcordia University, ndakaona kuti chainge chakasiyana chombo. Mumakore anotevera, haina kumbobvira yandigumbusa sechishandiso chakanakisa chedzidzo. Zvino, ini ndiri kutonyanya kufara nezvekuishandisa sezvo inova yepamusoro-chikamu chirongwa kuApache Software Foundation.
Vazhinji vanogadzira zvinoshamisa kutenderera pasirese vakabatsira mukugadzira NetBeans yekutanga-kirasi chishandiso chakakodzera kuve pasi peiyo Apache Software Foundation. Ikozvino, kupfuura nakare kose, kuenderera kwayo kwekushanduka kuchave kuchikurumidza, kuchiteerera kune izvo zvido zvebudiriro nharaunda, uye zvakanyanya kuvhurika kutora chikamu. Ini ndinodada nekuve ndine chikamu chidiki kwazvo mukusimudzira kwayo uye ndinofara kuona kuti ichakura sei nekushanduka mune ramangwana.
Nhoroondo Simon Phipps, Iyezvino Mutungamiri weOpen Source Initiative. uye nhengo yeApache nyowani yeNetBeans Project Management Committee, yakati:
"Apache ndiyo imba yakakwana yeNetBeans, ichibvumira muswe wayo wakareba wevanopa nhoroondo kuti varambe vachiita bhizimusi vachiparura imwe nhanho mukushanduka kwayo kune vatsva,"
Zvinorevei iyo nyowani yepamusoro-chikamu chimiro chimiro chinorevei
Nekuve chirongwa cheApache, NetBeans inobatsirwa kubva ku mukana wekutambira mimwe mipiro kubva kutenderera pasirese. Semuenzaniso, makambani makuru ari kushandisa NetBeans segadziriro yekushandisa kugadzira zvemukati kana zvekushambadzira. Ivo vane mukana wakanyanya wekupa kuNetBeans sechikamu cheASF pane sechikamu chebhizimusi rekutengesa. Panguva imwecheteyo, Oracle munhu ega anopa rubatsiro anoenderera mberi achishanda paApache NetBeans mumusha wavo mutsva, sechikamu chenharaunda yepasirese yevanopa rubatsiro, vese vanozvishandira nemamwe masangano.
Apache NetBeans software Inoburitswa pasi peiyo Apache v2.0 rezinesi. Kukura kwayo kuri inotarisirwa nechikwata chevashandi vanoshanda vechirongwa yakasarudzwa nenhengo dzayo. Iyo Project Management Committee (PMC) inotungamira mashandiro ezuva nezuva eProjekti, kusanganisira kusimudzira kwenharaunda uye kusunungurwa kwechigadzirwa.
Kana iwe uchida kuyedza NetBeans, unogona kutevera iyo dzidziso yakadhindwa naDavid, kana kuiisa mune snap fomati ne:
Kune mamwe masisitimu anoshanda, unogona kushanyira peji rerojekiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Apache® NetBeans ™ Inobudirira Pamusoro-Chikamu Purojekiti Mamiriro eApache Foundation
Iyo nyowani vhezheni yeElectron 5.0.0 inosvika uye kutsigirwa kwemakumi matatu nematatu kunoenderera
Kupera kwenguva: Sayenzi Linux icharegwa mushure memakore gumi nemana